Lova Mikasa Frantsa: ny teny frantsay an-trano Fiaraha-miasa - PACS - Mpisolovava avy amin'ny firenena Arabo. Arabo mpisolovava an-tserasera.
Lova Mikasa Frantsa: ny teny frantsay an-trano Fiaraha-miasa - PACS
Ny tambin, dia hita talohan'ny fanomezana hetra no hofany
Raha toa ka tsy te-hanambady, na tsy afaka ny hanao izany, avy eo, mba hanolotra ny sasany fiarovana ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny ny mpiara-miasa, dia tokony hanaraka ny frantsay an-trano fiaraha-miasa
Ny frantsay an-trano fiaraha-miasa ihany no misy ho an'ireo izay monina any Frantsa.
Izany dia hita ao mba toy izany koa ny firaisana ara-nofo mpiara-miasa. Raha toa ianao efa tao an-trano fiaraha-miasa avy amin'ny firenena niaviany avy eo dia tokony ho afa-miala avy ny fandoavam-bola frantsay lova ny hetra, raha toa izany fitsipika izany dia mihatra ao amin'ny firenena ny fahefana ao amin'ny an-trano ny fiaraha-miasa.
Izany ihany no misy ho an'ireo ao an-trano ny fiaraha-miasa
Efa misy ny mpiara-miasa sivily dia tsy navela hiditra ny frantsay fiaraha-miasa sivily, fa tsy misy ara-dalàna tsy misy mila manao izany, ho toy ny ianao dia tsy maintsy mitovy ny zo amin'ny maha ireo ny PACS. Ny iray amin'ireo tombony ny fiaraha-miasa sivily sata dia izay izany dia mamela anao mba hahitanao soa avy health insurance cover omena ny mpiara-miasa izay mety ho mihazakazaka ny raharaham-barotra ao Frantsa (mihevitra ho manana ho ianao raha tsy izany dia tsy afaka ny hahazo fiantohana fonony amin'ny alalan'ny fitaovana hafa). Raha toa ianao ka afaka miditra ao amin'ny teny frantsay an-trano fiaraha-miasa, azonao atao na ny sisa ny fototry ny hentitra ny fisaraham-tanana ny fananana, na izay fananana no tompon'ny sy nizara miaraka eo aminao, na zovy na zovy tena vola ny fividianana. Ny karazany voalohany ny fananany rafitra no antsoina hoe fitondrana de separation de pako izay samy mpiara-miasa dia mbola manokana tompon'ny fananana rehetra vidiana ao ny hany anarana. Araka ny fananana dia tsy niara-natao, saingy mbola nanana misaraka amin'ny samy mpiara-miasa, dia tsy ny fomba tsara indrindra raha te-hanolotra ho avy ny fiarovana ny sivily ny mpiara-miasa.
Azonao atao koa ny miditra an-trano ny fiaraha-miasa eo amin'ny fototry ny tompony ny fananany en indivision izay rehetra fananana voalaza ho niara-panjakana.
Na izany aza, na dia amin'ny indivision izany no azo atao mba hahatonga ny fanavahana manokana ny vokany sy ny fananany nitondra ho amin'ny fiaraha-miasa, ary ireo izay natao miaraka tamin'ny mpiara-miasa. Raha miditra ny fiaraha-miasa ao anatin ny dingana ny mividy trano, dia afaka ihany koa dia nametra ao amin'ny anaram-boninahitra ny asa ny fananana, ny fananana very eo ianao sy ny namanao. Mety ho dimam-polo, fa mety koa ho, izay nalatsaka ho hita taratra eo amin'ny lova kajy. Araka izany, na dia miaraka en indivision ny fananany manokana ny tsy endriky ny fizarana ny lova nozaraina ao ny fahafatesana, izay ho azonao izay tiany araka izay irinao. Raha miditra ao ny PACS mampitombo ny fiarovana amin'izay nomena ny velona mpiara-miasa, izany ihany koa ny zavatra ilaina mba ho miaraka amin'ny hafa lova mikasa fepetra.
Miditra an-PACS ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny ny mpiara-miasa soa avy manamarina ny amin'ny madio mba lovany ny hetra amin'ny fananana tavela ho azy ireo ny maty mpiara-miasa.
Raha tsy izany dia izy ireo no mendrika ho lovany hetra amin'ny tahan'ny enim-polo, afa-tsy ny miniscule vola fanampiana ny manodidina ny misy azy ireo. Noho izany, raha toa ianao tsy manambady, ny fiaraha-miasa sivily no fomba mahomby ny mahazo manodidina lova hetra ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny ny mpiara-miasa. Raha toa ianao efa tao an-trano fiaraha-miasa avy amin'ny firenena an-trano, dia ho ihany koa raha ny tokony ho afa-miala amin'ny teny frantsay lova hetra. Misy dia tsy misy an-kanavaka ho an'ny hafa nahazo ny lovany, izay ho tratry ny hetra (raha toa izy ireo dia tratry ny hetra amin'ny rehetra) ny fototry ny fifandraisany amin'ny maty. Niditra tao an-trano ny fiaraha-miasa tsy mandeha ho azy anie ny zon'olombelona ny lovany ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny ny mpiara-miasa. Araka izany, ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny ny mpiara-miasa ao an-trano ny fiaraha-miasa dia hizara tompony ny fananany na ny ankizy nodimandry. Raha toa izy ireo ka naniry, ny hafa inheritors en indivision afaka manery ny fivarotana ny fananana. Izany dia mety ho tena loza raha ny zanaky ny maty avy teo aloha fifandraisana. Raha vao ny fiovana ao amin'ny lalàna izao anie ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny an-trano ny mpiara-miasa tsara mba hijanona ao an-trano, fara fahakeliny isan-taona, dia tsy mitana ny zo hitoetra ao amin'ny tena an-trano mandritra ny fotoana tsy voafetra. Angamba ny tsara indrindra dia ny vahaolana ho olana izany, dia ny mividy ny frantsay an-trano en tontine, izay manana ny vokatry ny famindrana rehetra momba ny fananan ny manao izay hahatafavoahana velona fotsiny ny mpiara-miasa. Na izany aza, raha ny fampiasana en tontine dia mety ho ireo izay tsy manan-janaka ivelan'ny fifandraisana, amin'ny fotoany avy izy, dia tsy sahaza ho an'ireo ankizy avy amin'ny fifandraisana hafa. Izany dia satria disenfranchises lafiny iray amin'ny kokoa ny fianakaviana. Mety te mba hanamafisana ny zo amin'ny mpiara-miombon'antoka avy amin'ny fiaraha-mientana ifampizarana fanomezana ny fomba fitsaboana, dia dingana iray izay mety ho tena conveniently nanatanteraka mandritra izany fotoana izany rehefa hiditra ao an-trano ny fiaraha-miasa. Toy izany ny fomba hentitra no tsy miovaova noho izany, ny zava-nitranga ny fahatapahan'ny fifandraisana, ny fanomezana dia tsy azo misintona. Mety hisy ny fanomezam-pahasoavana hetra hofany, arakaraka ny zava-dehibe ny fanomezam-pahasoavana. Angamba ny tsara kokoa ny fomba ny tsirairay hanao ny sitrapony, dia izay tsy misy fanomezam-pahasoavana hetra ho hofany, ary izay afaka taty aoriana dia azo ovana, raha toa ianao ka naniry. Izany dia atao ao amin'ny lafiny iray dia manome fa ny velona an-trano ny mpiara-miasa mitana ny zo mijanona ao an-trano fa ny sisa tavela amin ny fiainana, ny dingana antsoina hoe attribution preferentially du ligament pianakaviana.
Ao ny raharaha na ny fanomezam-pahasoavana, na dia, samy manaiky ny latsa-paka lova ny zo na ny ankizy na ny antoko.
Mba hahazoana manodidina io olana io izany dia mety ho an'ny ankizy mba hiala (na mihoatra araka ny tokony ho, 'aza ela hianao'), manontolo na amin'ny ampahany, ny zo ho lovany nanaiky ny hafa inheritor e. g. sisa velona, mpiara-miasa Izany fomba fanao izany dia ny fianakaviana lova fifanarahana.
Farany, tokony handinika ihany koa mividy ny frantsay an-trano amin'ny alalan'ny ny fananana orinasa toy izany dia manolotra ihany koa ny mety mahazo ny manodidina ny latsa-paka lova zon'ny ankizy.
Mba hidirana ao amin ny PACS mila mitsidika ny eo an-toerana notaries manomboka ny fombafomba sy manomana ny fifanarahana. Manantena ny vola manodidina ny diman-jato amin'ny notaries saram, na dia ny tena vola dia miovaova arakaraka ny toe-javatra. Raha tianao ny mandray tsy tapaka ny vaovao amin'ny teny frantsay hetra, frantsay fananana trano sy monina ao Frantsa, dia afaka misoratra anarana mba handray ny maimaim-poana ny isam-Gazety.
הערבי חוקי באינטרנט האוסף הגדול ביותר של אנגלית תרגם את החוקים של מדינות ערביות